[ညနေပိုင်းတွင်၏ပန်းခြံမြို့တွင်းအေးမြ၏ညအထူးဖွင့်လှစ်] သြဂုတ်လ3(စနေနေ့),4(တနင်္ဂနွေ) 8:30 p.m. (နောက်ဆုံးဝန်ခံချက် 20:00 မှာဖြစ်ပါတယ် Cayenne 9:30) မှ 3:00 p.m. https: //www.tatemonoen.jp/event/page/2019_yusuzumi.php ...
၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ ၀၃:၀၇
အဲဒို-တိုကျိုပွင့်လင်း Air ကိုဗိသုကာပြတိုက် (အဲဒို-တိုကျိုပြတိုက်နောက်ဆက်တွဲ) ကအဖြစ်အပျက်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။
ဒါဟာ "ကလေးတွေကပွဲတော်ကြီး KOGANEI 2019" အလုပ်များခဲ့တယ်ဝံ၏အသွင်အပြင်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ http://koganei-kanko.jp/maron/archives/18689
၁၉ ဇွန် ၂၀၁၉ ၀၀:၃၀
ယင်းက "ဂျူပီတာနှင့်နီးစပ်သောတစ်လနောက်ခံ Scorpio အတွက်αကြယ် Antares ၏အရှေ့ဘက်မှကြည့်ရှု" ကိုထမ်းတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ http://koganei-kanko.jp/maron/archives/18683
ဝက်ဝံ၏ပန်းပွင့်၏သိတင်းကိုကြား။ ဒါဟာမိုးရာသီ, မိုးရွာအတွက်စိုစွတ်သော hydrangeas ၏စိုထိုင်းသောလှပသောပွင့်အစီရင်ခံစာဝင်ကြ၏။ http://koganei-kanko.jp/maron/archives/18662
ဒါဟာလှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများရဲ့အစိမ်းရောင်တံစဉ်များကိုစက်ဝိုင်းတစ်ခုဝက်ဝံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Honcho ၏ "Katsura ပန်းခြံ" နှင့် Nukuiminami ၏ "Nukuiminami ပန်းပွင့်နှင့်သစ်ပင်များပန်းခြံ" မြို့သစ်ပင်များ၏တံစဉ်များကိုဖြစ်ပါသည်။ http://koganei-kanko.jp/maron/archives/18648
၁၆ ဇွန် ၂၀၁၉ ၀၄:၁၆
၁၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ၀၁:၅၂
[အတွေ့အကြုံ! ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု! လက်သမား၏] ယနေ့အောက်တိုဘာလ 27 (စနေနေ့), အဆောက်အဦးအတွက်ဥယျာဉ်ကို "အတှေ့အကွုံ! Discovery! လက်သမား" ကျင်းပခဲ့တယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာတော့ , ဥယျာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း၏အဆောက်အဦးများပြန်လည်များ၏ပြုပြင်သိုလှောင်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်, ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာ၏ရိုးရာယာဉ်ကျွမ်းကျင်မှု၏တိုကျိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လက်သမား၏, လက်သမားအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးမှငါ့ကိုနည်းပညာ၏တဦးတည်းအဆုံးမေးရန် သငျသညျအနီးကပ်တက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီအတှေ့အကွုံဆန္ဒပြပွဲနှင့်ယနေ့ပြည်နယ်မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ...
[အဆောက်အအုံဥယျာဉ်ပွဲတော်] 2019, မတ်လ 28 ရက် (ကြာသပတေးနေ့) မတ်လ 28 ရက် (ကြာသပတေးနေ့) မှမတ်လ 21, 2008 (Thu) <အခမဲ့ဝင်ပေါက်> 11: 00 ~ 16: 00 (နာရီဖွင့်လှစ် 9: တက် 30 ရက်※ဝန်ခံချက် 17:00) ... မှ: 30 ~ 17
[ပန်းခြံ၏ညအထူးအဖွင့်ဆောင်းဦးရွက်များနှင့်အဆောက်အဦးဖွင့် lit] 11 မေလ 23 ရက် (သောကြာနေ့အားလပ်ရက်), 24 (စနေနေ့), 25 (တနင်္ဂနွေ) 16: 00 ~ 20: 00 ※ဖွင့်ပွဲ 9: 30 ~, ဝန်ခံချက် အဆိုပါမုန်တိုင်းထန်သောရာသီဥတုအတွင်းရပ်နား အဲဒို-တိုကျိုပွင့်လင်း Air ကိုဗိသုကာပြတိုက်※ကာလအတွင်း 25 (တနင်္ဂနွေ) မှနိုဝင်ဘာလ 23 ရက်နေ့တွင် 19:30 (သောကြာနေ့နှင့်အားလပ်ရက်များ) သည်အထိ3ရက်, ပန်းခြံ၏ "ညဥ့်ကိုအထူးအဖွင့်သည်အထိ ...
"သကြားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့ A & M ရိပ်သာလမ်းစတိုးဆိုင်သည်ဆိုပါက" မနက်ဖြန်ပြန်ဖွင့်သည်။ ငါ Marron ဆက်သွယ်ရေး Kawaraban "သကြားလုံးအထူး" သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ် Marron ဆက်သွယ်ရေးအတွက်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲရောက်လာတယ်။ ဂရုတစိုက်မြတ်နိုးဖို့ရှေးခယျြထားသောကုန်ကြမ်း၏အရသာ, လက်သမားတစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာအိမ်လုပ်သကြားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ပေါ်ပြူလာဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ http://koganei-kanko.jp/maron/archives/18643/
ဖြစ်ရပ်များ "ဤလောကနှင့်မြေကြီးနှင့်အနာဂတ်ဆက်သွယ်တရားမျှတသော" ၏နယူး Koganei ဘူတာတစ်ခုကြောင့်မိုးရာသီရာသီဥတုမနက်ဖြန်မှရွှေ့ဆိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ https://koganei-kanko.jp/event/5073/
ဤသည်ကြီးကျယ်သောအစားအစာ၏တစ်ဦးဂျေအေလယ်သမားများ Market ကအတွက်အဖွင့်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာလတ်ဆတ်-ထားတဲ့ (တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းရာအရပျ) ဖမ်းမိ, "Mu-chan Square ကို" စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း Boulevard 29 (စနေနေ့) ကနေ Renjaku လမ်းပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်။ ဖွင့်ရာမှ2ရက်, ဖြစ်ရပ်များနှင့်လနျးဆနျးရပ်တည်ချက်ရှိပါတယ်။
"Kajino-cho မည်သူမဆိုအလှပြင်ဆိုင်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမြို့လမ်းလျှောက် (အပိုတည်းဖြတ်ခြင်း) ဝန်းကျင်" ဟုအဆိုပါလောင်းကစားရုံပန်းခြံမှာဇူလိုင်လ 10 (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ပန်းခြံထဲတွင်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း tour, ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစားအသောက်များတွင်၏မြည်းစမ်း, အမှတ်တရပစ္စည်းရှိပါသည်။ တာဝန်ခံအခမဲ့ပါဝင်မှုကိုသင်မည်သူမဆို join လို့ရပါတယ်။ သောနေ့၌အဝတ်လမ်းလျှောက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်အတွက်လာပေးပါ။
"ခွေးလေ့ကျင့်ရေးစာသင်ခန်း + ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးရေး" ဟုအဆိုပါမြို့တော် Musashino ပန်းခြံအတွင်းကျင်းပလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သော, တစ်ဦးချင်းစာသင်ခန်းအဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်အလွန်အကျွံရှိလားကိုက်ပြီးနောက်, ဘေးအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သေတ္တာလေ့ကျင့်ရေးသည်အထိပေါ်တွင်လာကြစိတ်လှုပ်ရှားအကြိုက်ဆုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းကနေ, ထိုင်လည်းခွေးနှောငျ့ရှကျကြောင်းကိုသင်၏စိုးရိမ်ပူပန်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလက်ခံခဲ့သည်။ ထိုသို့အဖြစ်မကြာမီ home page ကိုမှတတ်နိုင်သမျှ, Musashino ပန်းခြံဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုယ်စားလှယ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖုန်းသို့မဟုတ်တစ်ဦး Pre-မှတ်ပုံတင် (ပထမ-လာ, ပထမ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံ) ဖြစ်ပါသည်ကတည်းက။
chat ဖို့ Koganei ကြိုဆိုပါ၏! သင့်ရဲ့ရှိရာဧရိယာ၏ကျက်သရေရဲ့ဘာသာစကားမျိုးစုံအုပ်စုတစ်စုချက်တင်အတွက်ကမ္ဘာသို့ပေးပို့ပါစေ! Group မှ Chat ကိုအဆိုပါဒေသ၏ multi-ဘာသာစကားအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံခရီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့, စားသောက်ဆိုင်, နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦများနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ကဲ့သို့သော "ဆွဲဆောင်မှုနဲ့လူဒေသခံသတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်ချင်" နှင့်ဂျပန်ခရီးသွားဧည့်ဖို့သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်အတိုင်း, သင်တို့၏ဧရိယာ တစ်ဦးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ "လောကကလူ" ချိတ်ဆက်ပါ။ သင့်ရဲ့ post ကိုထိုကဲ့သို့သောထိုင်းနှင့်အင်ဒိုနီးရှားအဖြစ်ဘာသာစကားအားလုံးအပါအဝင် 104 ဘာသာစကားများအတွက်တစ်ပြိုင်နက်ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကလူအုပျစုချက်တင်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်များအတွက် 104 ဘာသာစကားများတစ်ဦးချင်းစီကို web စာမျက်နှာကတဆင့်, သင်တို့လည်း Real-time အတွက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပေါ်လာကြ, ကမ္ဘာ၏လူအရန်သင့်ရှိသည်သောသတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်ကူးစက်သော, ဆက်သွယ်ရေးပျော်မွေ့ကျေးဇူးပြုပြီး!
၁၉ မတ် ၂၀၁၉ ၀၉:၃၉